Madaxweyne Gaas oo kulan Deg deg ah isugu yeeray Taliyayaasha iyo Saraakiisha amaanka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 6 May 2016
Madaxweynaha maamulka Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas ayaa goor dhow shir deg deg ah la qaatay Taliyayaasha iyo Saraakiisha ciidamada Nabadgalyadda Puntland.
C/wali Maxamed Cali Gaas, ayaa Saraakiisha la sheegay inuu kala hadlayo arrimaha ku saabsan iska horimaadkii uu ku dhaawacmay wasiirka Amniga Puntland.
Gaas ayaa Saraakiisha ku amray in amniga si deg deg ah wax looga qabto isaga oo ka dalbaday Saraakiisha in Ciidamada dagaalamay laga soo dhex saaro kuwa rasaasta la helay Wasiirka Amniga.
Warar soo baxay ayaa sheegaya in uu Madaxweynuhu amar ku bixiyey in dhamaan Xabsiga loo taxaabo kooxihii arrimahan lugta ku lahaa.
Taliyayaasha iyo Saraakiisha ayuu sidoo kale ku wargaliyay in baaris deg deg ah lagu sameeyo dhacdadan, waxaana Wasiirka Amniga Puntland la sheegay in uu caafimaadkiisu wanaagsan yahay oo dhaawacu dhinaca lugta ka soo gaaray.
Sidoo kale, C/wali Gaas, waxa uu sheegay in Puntland ay mamnuuc ka tahay in Taliyayaal is fahan’waa uu soo kala dhex galay ay isku adeegsadaan Hubka maamulka isaga oo Taliyaha Booliska iyo Kan Burmadka ka dalbaday inay kasoo jawaabaan arrintaasi.
Ugu danbeyntii, Lix askari oo ciidamada ka tirsan ayaa ku dhaawacmay israsaaseynta ciidamada dhexmartay.